July 2019 - ThutaStar
July 13, 2019 Thuta Star 0
နှစ်ဖက်မိဘအစုံအလင်နဲ့ စေ့စပ်တောင်းရမ်းကြတော့မယ်ဆိုရင် ဒီအချက်လေးတွေ မှတ်ထားပေးနော် စုံတွဲလေးတို့ရေ ချစ်သူဘဝရောက်ပြီး တူနှစ်ကိုယ်အတူနေဖို့ ရှေ့တဆင့်တက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မိဘတွေကို ပြောပြီး တောင်းရမ်းလက်ထပ်ခွင့် တောင်းဖို့ ပြင်ဆင်ကြရမှာပါ။ အဲဒီနောက်မှာမှ မင်္ဂလာပွဲလေး ကျင်းပကြပေါ့။ တောင်းရမ်းကြတဲ့အချိန်ဟာ မင်္ဂလာပွဲလေး ကျင်းပကြတဲ့ အချိန်ထက် ပိုပြီး စိတ်လှုပ်ရှားစရာ များမှာပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီစေ့စပ်တောင်းရမ်းပွဲလေး […]
နင့် အသည်းနှလုံး ငါ့ကိုပေး ဆိုပြီး ချစ်သူရဲ့ ရင်ဘတ်ကို ဓားနဲ့ထိုးခဲ့တဲ့ ကောင်မလေး…
ကိုယ့်အသည်းနှလုံးက မင်းအတွက်ပဲ” လို့ပြောခဲ့ရင် အရမ်းကို romantic ဆန်တယ်လို့ ထင်ကြမှာပါ။မကြာသေးခင်ကမှ တရုတ်နိုင်ငံ Zhejiang ပြည်နယ်က အတွဲတစ်တွဲ စကားများခဲ့ကြပါတယ်။ စကားများပြီး ကောင်မလေးက လမ်းခွဲမယ်လို့ ပြောခဲ့ကာထပြန်သွားပါယတယ်။ချက်ချင်းဆိုသလို အမျိုသား ရှိရာကို ပြန်လှည့်လာပြီး “ကျွန်မကို ပြန်လိုချင်ရင် ရှင့်နှလုံး ကို ပေးရမယ်”ဆိုပြီး ပြောခဲ့ပါတယ်။ […]
ဖူးစာဖက်က ကိုယ့်ဆီကို အမြန်ဆုံး ချဉ်းကပ်လာစေချင်ရင်…
စာရွက်ပေါ်မှာ အနီရောင်ဆော့ပင်ကို အသုံးပြုပြီး မိမိဖြစ်လိုရာအနာဂတ်ဆုတောင်းတွေ၊ မိမိချစ်သူရဲ့ အနာဂတ်ပုံရိပ်တွေ ချရေးလိုက်ပါ။ ဒီနည်းကို ယောက်ျားလေးများ မလုပ်သင့်ပါ။ မိန်းကလေးများအတွက် သီးသန့်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းကို လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် အောက်ပါပစ္စည်းတွေကို ကြိုကြိုတင်တင်ရှာဖွေထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ချစ်သူကောင်းတစ်ယောက် မြန်မြန်ရရှိစေတတ်သောနည်းလမ်းတစ်ခု ( မိန်းကလေးများအတွက်သာ ) ( ၁ ) […]
ဘုန်းကြီးဆီက သင်္ကန်းပြန်ဝယ်ပြီးလှူတာ ကုသိုလ်ရပါသလား ငရဲကြီးပါသလား?
မင်္ဂလာပါ ဦးဇင်း။ တခုလောက်မေးချင်လို့ပါ။ သူများလှူ ပြီးသား ပစ္စည်းတခုကို ကိုယ်က ပြန်ဝယ်ပီး ပြန်လှူရင် ကုသိုလ်မရဖူးဆိုတာဟုတ်ပါသလား။ ဥပမာ ပြောရ ရင် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှ သင်္ကန်းတွေပေါများနေလို့ တပည့်တော်မက အသစ်တခု မဝယ်တော့ပဲ အဲသင်္ကန်းကိုပဲ ဘုန်းကြီးစီ ဝထ္ထုငွေနဲ့ပြန်ဝယ်ပီး ပြန်ပီး လှူရင် ကုသိုလ်မရဖူးလို့ပြောတာကြားဖူးလို့ပါ။ အဲတာ […]
ပြင်းထန်သော မုတ်သုံမိုးများ ရွာသွန်းခြင်းကြောင့် လူ ၄၀ ထက်မနည်း သေဆုံး…
ပြင်းထန်သော မုတ်သုံမိုးများ ရွာသွန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သော ရေကြီးမှု များ၊ မြေပြိုမှုများကြောင့် လွန်ခဲ့သော နှစ်ရက်တွင် တောင်အာရှတစ်လွှား၌ လူ ၄၀ ထက် မနည်းကိုသေဆုံးစေခဲ့သည်ဟု ဇူလိုင် ၁၃ ရက်တွင် တာဝန်ရှိသူများက ပြောကြားခဲ့သည်။ ဇွန်လမှစက်တင်ဘာလအထိ ကြာမြင့်သော မုတ်သုံရာသီသည် နှစ်စဉ် တောင်အာရှဒေသ၌ သေဆုံးမှုနှင့်ပျက်စီးမှုတို့ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန် […]
မြန်​မာစကားမှာ​တော့ ခြံခုန်​တယ်​၊ စနိုက်​​ကျော်​တယ်​စသဖြင့်​ သုံးနှုန်း​လေ့ရှိတဲ့ ​ဖောက်​ပြန်​တဲ့ကိစ္စဟာ လူ​တွေ အရိုးစွဲယုံကြည်​လာခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ တစ်​ကြိမ်​လုပ်​ဖူးရင်​ တစ်​သက်​စာ​ဖောက်​ပြန်​တတ်​​ကြောင်း သိပ္ပံနည်းကျ ​လေ့လာ​တွေ့ရှိပါတယ်​။ အချစ်​​ရေးမှာ သစ္စာမဲ့တဲ့သူ​တွေဟာ ​ရှေ့လူတစ်​​ယောက်​နဲ့တွဲရင်း ​ဖောက်​ပြန်​တတ်​ရင်​ ​နောက်​လူတစ်​​ယောက်နဲ့တွဲလဲ ​ဖောက်​ပြန်​ဦးမယ်​ဆိုတာ အမှန်​တရားဖြစ်​​​ကြောင်း Archives of Sexual Behaviour ​မှာ ​ဖော်​ပြခဲ့တဲ့ ​လေ့လာ​တွေ့ရှိချက်​အရ […]
ကိုလူချောတို့အဖွဲ့ ဦးဇော်ကြီးရဲ့အိမ်အထိ အလှူငွေ သွားရောက်ပေးအပ်ခဲ့….
မြန်မာ့ဗီဒီယိုလောကရဲ့ လူကြမ်းသရုပ်ဆောင်များထဲက ဦးဇော်ကြီး ဆိုရင် ကလေးကအစ လူကြီးအဆုံး သိကြပါတယ်။အခုဆိုရင် လူမှုကွန်ယက်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ လူကြမ်းသရုပ်ဆောင် ဇော်ကြီး ရဲ့ အင်တင်ဗျူးကို ကြည့်ပြီးကြပြီ ထင်ပါတယ်။ လူကြမ်းသရုပ်ဆောင် ဇော်ကြီးက သူ့ရဲ့ မိသားစုလေးနဲ့ နေထိုင်နေတဲ့ ကျူးကျော်အိမ်လေးကို ဖျက်ပေးရတော့မှာမို့ ဒုက္ခရောက်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ […]
ကမ္ဘာ့ဘောလုံးပရိသတ်ကြားမှာ အလွန်ရေပန်းစားနေတဲ့ မြန်မာပြည်တွင်းကဓာတ်ပုံတစ်ပုံ
ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ ဘောလုံးအားကစားနည်းကို အလွန်အမင်းရူးသွပ်ခုံမင်လွန်းကြသူတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ လုံးဝလားလားမှ မသက်ဆိုင်တဲ့ အနောက်ကမ္ဘာက ဘောလုံးပွဲတွေကို အချိန်ကုန်ခံ၊ အိပ်ရေးပျက်ခံပြီး အလွန်အမင်း ရူးသွပ်ခုံမင် အားပေးနေရတာကို ကြည့်ရင် မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ဘောလုံးအပေါ် ရူးသွပ်မှုကို တွေ့ရမှာပါ။ ဒါတင်မဟုတ်သေးပါဘူး။ မြန်မာ့လက်ရွေးစင်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာတော့ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ ဘောလုံးကို အလွန်ရူးသွပ်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကို အထင်းသားတွေ့မြင်ရမှာပါ။ […]
မိန်းကလေးတစ်ယောက် အပျိုကြီးပဲ ဖြစ်တော့မှာ သေချာသလောက်ရှိတဲ့ လက္ခဏာများ…
အသက် ၃၀ ကျော်မှ လက်မထပ်ဘူးဆိုရင် အပျိုကြီးစာရင်းထဲဝင်နေပါပြီ။ အဲ့မတိုင်ခင်မှာ အပျိုကြီးဖြစ်တော့မယ့် အခြေအနေ လက္ခဏာတွေဖြစ်နေမှာပါ။ အပျိုကြီးဖြစ်တော့မယ့် မိန်းကလေးတွေမှာ တွေ့ရတတ်တဲ့ လက္ခဏာတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ (၁) ဇီဇာကြောင်တတ်တယ် တစ်ခုခုဆို ဇီဇာကြောင်တတ်တယ်။ အစားအသောက်ဆိုလည်း ဇီဇာကြောင်တတ်တယ်။ အ၀တ်အစားရွေးရင်လည်း ဇီဇာကြောင်တတ်တယ်။ သူတို့ကို တစ်ခုခုပြောလိုက်ရင်လည်း ကန့်လန့်တိုက်နေတတ်တယ်။ […]
သူမနာမည်နဲ့ ဘုရားမှာ အလှူပြုပေးခဲ့တဲ့ အမည်မသိသူတစ်ဦးကြောင့် ပီတီဖြစ်နေတဲ့ ပိုင်ဇေရဲထွန်းဇနီး…
ပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားအားကျစရာကောင်းတဲ့ အနုပညာရှင်မိသားစုတွေထဲမှာ ပိုင်ဇေရဲထွန်းတို့ မိသားစုလေးဟာလည်း ထိပ်ဆုံးမှာပါဝင်တဲ့ မိသားစုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပိုင်ဇေရဲထွန်းတို့ဇနီး မောင်နှံနှစ်ယောက်ဟာဆိုရင် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်အလွန်ချစ်တတ်ကြပြီး အိမ်ထောင်ရေးကိုလည်း နားလည်မှု့တွေနဲ့ ဖန်တီးတည်ဆောက်ထားကြတာကြောင့် ပရိသတ်တွေက လေးစားအားကျချစ်ခင်နေကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ ပိုင်ဇေရဲထွန်း ရဲ့ ဇနီး ဇင်သဲနိုင်က သူမရဲ့ နာမည်နဲ့ အလှူပြုပေးခဲ့တဲ့ သူကြောင့် ပီတီဖြစ်နေတဲ့ […]